” ရည်းစားစာလေး ရေးပေးပါ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ရည်းစားစာလေး ရေးပေးပါ “
” ရည်းစားစာလေး ရေးပေးပါ “
Posted by ခင်ခ on Mar 17, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 40 comments
မတ်လ ၂၇ နေ့မှာ ကွန်မန့် Close မှာမို့
ကျွန်တော်တို့ စာကိုဘယ်အချိန်ကစပြီးရေးတတ်တာလည်း ဘယ်အချိန်က စပြီးဖတ်တတ်လည်းလို့ မေးခဲ့ရင် ကျွန်တော်ထင်တယ် က ခ ဂ ဃ င ဆိုပြီး မူကြိုတက်တဲ့အချိန် တစ်ချို့က သူငယ်တန်းတတ်တဲ့ အချိန်ကာလ ကစမယ်လို့ဘဲ ပြောရလိမ့်မယ်လေ။
အဲဒီမှာ တစ်ချို့လည်း ကျောင်းစာကို စိတ်ဝင်စားပြီး ရေးကြ ဖတ်ကြ ကျက်ကြ မှတ်ကြ စသည်ဖြင့် ကြိုးစားကြ သလို တစ်ချို့လည်း ရေလိုက်ငါးလိုက် ရေး ဖတ် ကျက် မှတ် ကြတာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် လူပျိုအရွယ် အပျိုအရွယ် ၀င်လာတဲ့အရွယ်ရောက်လာကြရင်တော့ ကျောင်းစာကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မကြိုးစာချင် တတ်တဲ့သူတွေတောင်မှာ စာကိုစိတ်ဝင်းစားလာကြတယ် ကိုယ်တိုင်ရေးကြတယ် သူများရေးတာကို ဖတ်ချင် ကြတယ် မိန်းခလေးတွေလည်း ထိုထိုသောစာကို မျှော်မိကြတယ် ပြန်ရေးကြတယ် ဒါက သဘာဝပေးလာတဲ့ ရင်းတွင်းခံစားချက်တွေကို စာပေ ကညစ်ပေါ်မှာ စာလိုတစ်မျိုး ကဗျာလိုတစ်သွယ် အမှတ်တရလက်ဆောင် တွေနဲ့တနည်း ပြုမူရေးလာကြတာက ရည်းစားစာလေး တွေပါ။
ဂဇက်မန်ဘာဝင်မိတ်ဆွေတို့ သင်ကိုယ်တိုင် အဲလို ရည်းစားစာမျိုးရေးခဲ့ဖူးတာမျိုး သို့မဟုတ် ရည်းစားစာဖတ်ခဲ့ ဖူးတာမျိုးရှိလို့ အမှတ်ရသေးတယ်ဆိုရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် မရေးခဲ့ဘူးပေမယ့် အခုရေးချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ ရေးမယ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ ဒီပိုစ့်ရဲ့ကွန်မန့်လေးမှာ ၀င်ရောက်ကာ ရည်းစားစာလေး ရေးပေးသွားပါ လားဗျာ။
ခံစားချက်ကောင်ကောင်းဖြစ်စေမယ့် ရည်းစားစာ ရေးနိုင်သူကတော့ ၁၃ရ၆နှစ်၏ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ငွေဖလားနဲ့ ရေကစားရမယ်နော်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ရဲစားစာက ပိုစ့်ကဒ် လေးပေါ်မှာ ရေးခဲ့တာ………..
ငယ်လို့ လား ချစ်လွန်းအား ကြီးလို့ လား မသိ….. စာနဲ့ပေနဲ့မပြောတက်ဖူးရယ်….
နောက်ပိုင်းတော့ အကျယ်တ၀င့် ရေးဖြစ်သား…. ငွေဖလား နဲ့ မဆော့ရချင်နေပါစေ….
ရည်းစားစာ ရေးဒဲ့ နေရာမှာတော့
ကျုပ်ဆရာ ဥငေးကျောက်စ် က စပယ်ရှယ်လစ်ပဲ …
ဒါက ကြုံတုံးလေး ကျော့်ဆရာအကြောင်း ဖောက်သည်ချတာ ..
ဒီလူ ဥခင်ခကြီး ရည်စားစာတွေ စုပြီး
ဘာလုပ်ဖို့ ကျံနေဒုန်းတော့ မတိဘူး ….
ဒါပေသိ .. ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်းစားစာ ကဗျာလေးကို ကူးတင်လိုက်တယ်ဗျာ …
အတွေးတွေထဲမှာ စိုးမိုးထားတယ် …
ရင်ထဲမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အချစ်တွေက
စိတ်ကူးနဲ့ ရူးနေစေတတ်တယ် …
နည်းနည်းလေး နားထောင်ကြည့်ပေးပါလား ..
‘သိပ် ချစ်နေမိတယ်’ လို့
တိုးတိုးလေး ပြောနေပါလိမ့်မယ် …
မလွတ်တမ်း ဖက်တွယ်ထားခဲ့တယ် …
‘သူ မချစ်ရင် အသက်မရှင်နိုင်ဘူး’ …. ဆိုပဲ ။
ကူးတင်သူ မဟာရာဇာ အံဇာတုံးကို ကျေးဇူးပါဗျို့။
အဲ့စာ နာ့ကို ​ပေးတဲ့စာ မဟုတ်​ဘူး​​နော်​.. နာ့ကို ​ပေးတဲ့စာ​တွေထဲမှာ ​ကောင်းတာ​တွေ အားကြီးရှိရက်​နဲ့.နာ့ကို မ​ပေးဖူးတဲ့စာကို တင်​တာ.. ဘာသ​ဘောလား..
ဘယ်တစ်ယောက်ကို ပေးခဲ့တဲ့စာလည်း မသိဘူး။
လုံမရေ အားမနာနဲ့ အမှုမှန်ပေါ်အောင်သာ စစ်ပေတော့။
အဲ ရည်စားစာဆိုတာ တစ်ခါတလေ တစ်ယောက်ထဲပေး ရည်းစာဖြစ် ရှိသလို တစ်ခါတလေကျတော့လည်း တစ်ယောက်မကပေး ရည်စားတစ်ယောက်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါ၏။ တစ်ချို့ စွံတဲ့သူများကျတော့ တစ်ယောက်မကပေး ရည်စားလည်း ထည်လဲတွဲရှိပေသမို့ ကိုယ့်မပေးတဲ့စာဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်က ပြသနာမလုပ်ပါနဲ့ တူမလေးရေ။
လက်ရှိနှစ်ယောက်ချစ် ရည်စားဖြစ်ရင် နောက်တော့တစ်မျိုးတိုးလို့ ချစ်ပြန်ဆိုသလိုနေပေတော့ လို့ဘဲဆိုရပါ့မယ် လုံမလေးရေ။
အ မ လေး ငါ့တူ ကြီး ရယ်
အ ဘွား တို့က တော့ အ သက် လဲ ကြီး ပါ ပြီ
ဒါ မျိုး တွေ ရေး လဲ မ ရေး ဝံ့
ဖတ် လဲ မ ဖတ် ဝံ့ ပါ ဘူး ကွယ်
( တုန် တုန် ချိ ချိ မေး ရိုက် သံ ဖြင့် ဖတ် ရန်)
ဘွားဘွား snow smile ရယ် ဖြေး ဖြေး ပြော ပါ ကွယ်။ ဘွား ဘွား က အ ခု တောင် ရုပ် ရည် ချော နေ သေး သာ ဆို တော့ ငယ် ငယ် က ရည်း စား စာ အ များ ကြီး ရ ခဲ့ တဲ့ ထဲ က များ အ လွမ်း ပြေ ပြော လေ မ လား မျှော် မိ တာ ပါ ကန့် တော့ နော် ကန် တော့ ဘွား ဘွား။
အ တိတ် ရယ် ဇာတ် ကြောင်း ပြန် ပြောင်း မ ပြော ချင် တော့ ဘူး ကွယ်
ဆို တဲ့ သီ ချင်း ဆို ရ မ လို
ဖြစ် နေ ပြီ ငါ့ တူ ရယ်
အ ဘွား အ ကြောင်း မ သိ သေး လို့ပါ
ဒေါ်မြ လေး လေ သံ နဲ့
ပြောာာာာာ ကို မ ပြော ချင် ဘူး လို့ဘဲ
ပြော ချင် မိ တော့ တယ်
(ဖီလင်. . . . . ဝမ်း နည်း ကြေ ကွဲ ) ;’ (((((
မီးအနေနဲ့ ဒါမျိုးတွေ မစဉ်းစားသေးပါဘူးရှင့်(မော်ဒယ်ဗြဲလေသံဖြင့်)ပြောသည်
သာမီးလေး moonpoem ရေ စဉ်းစားလို့ ရည်စားစာများရခဲ့ရင် ဦးခင်ခကြီးကို ပေးဖတ်မှာလားဟင်။
ရေး အုံး မှာ ငယ်မူ ငယ် သွေး အပြည့် နဲ့
ကျနော် ကတော့ ရီးဇားစာ ရေးလည်း အမြီးအမောက်မတည့်
အဲသလိုနဲ့ အခုလို ၂၆ ကျော်လို့ ၂၇ ထဲရောက်နေတာတောင်
လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာ ရီးဇားရယ်လို့ မရှိတာသာ ကြည့်ပါတော့ ခညာ
ဒီပိုစ့်အောက်မှာ ရေးသွားကြမယ့် ရီးဇားစာတွေကို နမူနာယူ စုတုပြုရမယ်
ပြန်ရတာလဲ ၁၅၀၀ လား သဂျီး ?
ရည်းစားစာဆိုတာဘာမှန်းတောင်မသိဘူး . . .
ရင်ထဲမှာ သူ့အကြောင်းတွေးတိုင်း ပျော်နေတယ်ဆိုရင် ချစ်တယ်ခေါ်လား ?
ဘရန်းဒက် ကေဇီ says:
ရည်းစားစာ ကို ဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ရေးရေးးး
အဲဒီလူကို မကြွေရင် အကျိုးမရှိ။
အဲ။ လူကို ချစ်မချစ်မသေချာပဲ ရည်းစားစာကောင်းလို့၊ ဖတ်ကောင်းလို့၊ အရေးကောင်းလို့ ကြွေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ အပြောကောင်းသူဆီမှာ သက်ဆင်းရဖို့သေချာနေပြီ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြောကောင်းတဲ့သူက တစ်ယောက်မကနိုင်ဘူးလေ။
သများသဘောကတော့ လူကို မယုံရင်
စိတ်ထဲက သဘောတွေ့တယ်၊ စိတ်တိုင်းကျတယ်၊ ယုံကြည်တယ်၊ ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်က စပြီး ချဉ်းကပ်ဖို့ ဝန်မလေးခဲ့ပါဘူးးးးး
အာ့ဆို ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူ့မှ အပြစ်တင်ဖို့မရှိ။
ခုခိ၊ ခုခိ၊ ခုခိ။
ရည်းစားစာများ ရှိရင် ဝေဌပါပြောတဲ့ဉ္စာ
ဘရန်းဒက် ကေဇီကလည်း မဝေဌချင်နေပေါ့ဗျာ။
မင်း ပြန် ချစ် ရင် ချစ်
မချစ်ရင် ညှစ် ပလိုက် မယ်
ငှဲ လျောင်း ငှဲ လျောင်း
လူ ချင်း တွေ့ မှ ပြော ဘာ မယ်
ကဲ ….ခ ကတောင်းဆိုမှတော့
လေမှာ ၀ဲတဲ့ ရော်ရွက်ဝါ…
မိုးရာသီမှာ မိုးတွေ ချုန်း
မင်းကို ချစ်တာ တစ်သက်လုံး…………….
ကိုင်း…ရေးပြီးပြီ ..ပေးတော့..အဖြေ….အဲ…. ပေးတော့..မစ်ဆူဘီရှီ အဲကွန်း…
မိဗုံ ရည်းစားစာလေး ခံစားမှုနဲ့ ဖတ်နေတာအကောင်း
ဟိုရွာပြင်ဇနပုဒ်က ပြောင်းလာတဲ့ ခင်ခ အဲကွန်း ဘယ်ရှိလိမ့်မလဲ
ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း ကြီး မှတ်မိနေပါတယ် ကိုခင်ခရေ…။
ကျွန်တော်က ၁၉၈၇ မှာ ရည်းစားစထားတာ ခင်ဗျ…။
ဒင်းကို ကျွန်တော်က ထူးအိမ်သင် ရဲ့ နာရီပေါ်က မျက်ရည်စက်များ
အထဲမှ မရိုးသားတော့ဘူး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ပါတယ်လေ…။
သူငယ်ချင်းလေး ချစ်တယ် ဘယ်လိုပြောရမလဲ
ကိုယ်ဒီလို သိတ်သိတ် ချစ်နေတယ်
ဆိုတဲ့ စာသားလေးတွေကို မျဉ်းတားပေးလိုက်တာဗျ…။
အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးရည်းဇားကို ပေးတဲ့ ရည်းဇားစာပါ…။
ထူးအိမ်သင် သီချင်းစာအုပ်နဲ့ပဲ ခင်ဗျ…။
သီချင်းက မေ့လိုက်တော့ တဲ့…။
ကိုဘက်လက်ချောရဲ့ ရည်းစားစာနည်းလမ်းလေးကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ပါဘဲဗျာ။
ရည်းစားစာကတော့ သက်သေသကာယနဲ့ လက်ပူးလက်ကြပ်မိမှာစိုးလို့…
ဒါရိုက်ဟစ်နဲ့ တော်ကီပဲ လွှတ်လိုက်တာ အိမ်ထောင်ကျပါလေရော…
ကျောက်စ်နည်းက အဖြေတန်းရတယ်ခင်ဗျ… အာဟိ
သိသူများ တေတေနိတ်ကြပါ… (ခွက်စ်ဒစ်တူ… အန်တီဒုံ)
သြော် ကိုကျောက်ရယ် ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ရည်းစားစာဆို လက်ပူးလက်ကြပ်မိမှာစိုးရတယ်လို့ဗျာ။
သဂျီးမင်းက ယီးဇားစာလား ပိုက်ဆံချေးတာလား
အဟင့် အဟင့် တူညားကိုအားငယ်အောင်လာလုပ်နေဘာဒယ်တော့ ဟောဒက ကိုခင်ခကြီးက။ တူညား ရဲဇားစာလဲ အပေးမခံရဖူးဘူး ရဲဇားစာလဲပေးဖူးဘူး။ တခါတည်းကားတင်ပြေးလိုက်တာပဲ အေးရောနော့ အာဟိ
သူ များ တွေ က
အယ်လ် တီ သင့် မ တီ သင့် အ ပြင်း အ ထန် ဖြစ်
မောင် ခင် ခ ခမျာ တော့ ရည်း စား စာ ခေတ်
စကားကြီး ၁၁ ခွန်း မှာ ကိုယ်မဖြေချင်တဲ့ မေးခွန်းဆိုရင် မေးခွန်းနဲ့ ပြန်ဖြေရတယ်လို့ မှတ်ထားဖူးလို့။
ဒီတခါ နယ်ပြန်မှ အိမ်မှာသိမ်းထားတဲ့ ငယ်ငယ်က ရဲဇားစာတွေ ပြန်ဖတ်ပြီး ရေးပြမယ်။(ယုံမလားလို့ ကြွားထှာ)
ညီမလေးတယောက်က သူ့ကို ရည်းစားစာလိုက်ပေးတဲ့သူကို ခေါက်ထီးနဲ့ ရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။
အဲဒါနောက်နေ့ လွယ်အိတ်ထဲ အတင်းထိုးထည့်သွားတဲ့ စာကို လာပြတော့ `ခိုင်ရယ်(ညီမနာမည်က ခိုင်ပါတယ်)ခေါက်ထီးထုတ်လို့ ကြောက်ပြီးဆုတ်မယ် မထင်ပါနဲ့……………..´ တဲ့။
ညီအမ နှစ်ယောက် ဖတ်ပြီး ဟားလိုက်ကြရတာ။
(အဲဒီညီမလည်း အခု အပျိုကြီးပါပဲ)
ကျမအမ တယောက်က တော်တော်ချောတော့ (ကျမနဲ့ မတူလို့ ချောတာ)သူ့ကိုပေးတဲ့ ရည်စားစာတွေ စက္ကူပုံးကြီးနဲ့ တလုံး အပြည့်ပဲ၊အဲဒီထဲ ဘိုလိုရေးထားတဲ့ စာပါသေးတယ်။အမက နားမလည်တော့ ဘာတွေ ရေးထားတာလဲ ဆိုတာနဲ့ ဖတ်ပြပြီး ဟဟာဟားခဲ့ရသေး။(အဲဒီအမကတော့ အပျိုကြီး မဖြစ်ခဲ့)
အမဒုံ ရေ စက္ကူပုံးကြီးနဲ့တလုံး ရည်းစားစာတွေကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဗျ ခုထိသိမ်းထားသေးရင် အဲ ဒီထဲက တစ်စောင်လောက်များ ဝေဌမလားဟင်။
၁၃၇၅ ခုနှစ် တပေါင်းလဆုတ် ၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် ၁၀နာရီ ၄၀ မိနစ် အချိန် ကြည့်မိချက်အရတော့ (+2) ရရှိထားသော မဟာရာဇာ အံစာတုံး ၏ ရည်းစားစာက အသာစီးရနေပါလားနော်။
ဟရောင်…ပေါက်ကရလုပ်မယ်မစဉ်းစားနဲ့ ..မင်းအနာဂါတ်ကို ငါပိုင်တယ် …လို့ပြောလိုက်မိပါတယ်…ပါးစပ်ဆော့ပြီး…အဲ့ရာနဲ့ အဲ့ကောင်မလေးက တားတားကိုလိုက်ကပ်နေရော….ဘာလဲဟ ပေါ့….နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့ …ကိုကို ..မီးတို့ချစ်သူ သက်တမ်း တစ်လပြည့်ပြီနော်…ဆိုပြီး ကိတ်မုန့်ကြီးရောက်လာရော…အဟိဟိ ….အဲ့ရာနဲ့ တားတားလဲ ချော်လဲရောထိုင်ပလိုက်တယ်..( အဆက်ဟောင်းကို ပြောပါတယ်..အဟိဟိ )
အခုမှ ပြန်တွေ့လို့ အပြေးအလွှား လာခဲ့တာဗျို့
မောင်မာဃရဲ့ ရည်းစားစာကတော့ ဟောဒမှာ
ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ သင့်သလို ဝေဖန်ပါကုန်
သူ့ ရဲစားစာ က မအောင်မြင်ဘူးရယ်။ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူကိုပဲ ပေးလို့ရမှာ။
သများ စာက မှ မိုက်တာ။
ဒါပဲ။ ရေးနိုင်ရင် အဲ လက်ရေးလည်း လှသေးရင် တစ်မျက်နှာလုံးရေးးး
မရေးနိုင်ရင် တစ်ခါ ပဲ ရေးးး
အေးရော။ စာဖတ်တတ်ရင် အိုကေပြီ
မကျေနပ်လို့ အဲ့စာ ပြန်ပေးရင်လည်း အဖြေရပြီလို့သာ ဇွတ်မှတ်တော့။
ဘရန်းဒက် ကေဇီတို့ အကြံပိုင်ချက်ကတော့ မဆိုးဘူးဘဲ။
” ချစ်တယ် ” စာလုံးတွဲနဲ့လုပ်စားလို့ ရ ပ ဟ ။
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကူညီတောင်းလို့ ရေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်တယ်
၈ တန်းကျောင်းသားဘ၀ သူငယ်ချင်းက English လို ရည်းစားစာတစ်စောင်ရေးပေးပါလို့ အကူညီ တောင်းလာတယ်။ သြော် ၁၀ တန်းက မမတွေပေးချင်လို့နေမှာဆိုပြီး
Dictionary တွေလှန်၊ Grammer တွေပြန်ကြည့်နဲ့ အားကြိုးမာန်တက်ရေးပေးလိုက်ပါရော
နောက်ကျတော့ အဆင်ပြေသွားပြီဆိုပြီး ခေါ်လာတဲ့ကောင်မလေးက ကိုယ့်အတန်းထဲက English စာ အညံ့ဆုံးကောင်မလေးဖြစ်နေရော။
ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှ စဉ်းစားလို့မရဘူး၊ ငါရေးတာညံ့လို့လား၊ တစ်ယောက်ယောက်ကဖတ်ပြလို့လား၊………….??????
“ သြော် ဒါလေးများ၊ I Love You လို့ပါရင် ရည်းစားစာမှန်းသိတယ်လေ၊ ကျန်တာဖတ်တတ်ဖို့
အဲဒီတော့ ဗရမ်းထက် ကေစီ ပြောသလို “ ချစ်တယ်” ဆို ပြီးတာပဲမဟုတ်လား။